मोह उर्जाका अनगिन्ती फाइदा, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य मानवीय स्वभाव हुन् । यीमध्ये यहाँ मोह उर्जाका बारेका प्रकाश पार्ने प्रयास भएका छन् । वस्तुतः मोह भनेको जीवन उर्जाकै एउटा भाग हो, जसलाई मानिसले जन्मजात लिएर आएको हुन्छ । मोहको अर्थ हो, कसैप्रति वा कुनै विषयप्रति मोहित हुनु वा आशक्त हुनु । विषय धन सम्पतिको पनि हुन सक्छ, सन्तानको पनि हुन सक्छ, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पद र प्रतिष्ठाको पनि हुन सक्छ । मोह उर्जाका अनगिन्ती फाइदा छन् तर प्रयोग गर्न भने जान्नुपर्छ । अन्यथा लाभको बदला हानि हुन्छ, हुन पुग्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ प्रयोग गर्न जान्नु भनेको के हो ? उत्तर सहज छ रूपान्तरण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गर्नु । पुनः प्रश्न उठ्न सक्छ कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने । त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन । कुनै बस्तुप्रति सिधै आकर्षित हुनु मोह हो, स्रोत पत्ता लगाई त्यसप्रति आकर्षित हुनु रूपान्तरण हो ।
मोहित हुनुुस्, नहुनुस् भन्ने होइन । नहुनुस् भने पनि नभई बस्न सक्नुहुन्न तर स्रोत पत्ता लगाई त्यसप्रति आकर्षित हुने बानी बसाउनुभयो भने स्वतः रूपान्तरण हुन्छ । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा विषयप्रतिको आकर्षण मोह हो, उसको स्रोतप्रतिको आकर्षण रूपान्तरण हो । विषयप्रति आकर्षित हुनुभयो दुःख पाउनु भयो । स्रोतप्रति आकर्षित हुन थाल्नुभयो सुख पाउनु भयो ।
मानिलिनुस् तपाईँ कुनै हजामको पसलमा जानुभएको छ । कपाल वा दाह्री काट्न लाग्नुभएको छ । हजामले कपाल त काटिदियो तर उसको ग्राहकप्रतिको व्यवहार भने राम्रो थिएन । झर्कोफर्को तथ्र्यो, राम्रोसँग बोल्न पनि गाह्रो मान्थ्यो । उसको व्यवहार मन परेन र अर्को दिन नजिकैको अर्को पसलमा जानुभयो । उसको भने काम पनि राम्रो थियो, व्यवहार पनि राम्रो थियो, बोलीचाली पनि मीठो थियो ।
उसको व्यवहार मन प¥यो । अर्को पटकदेखि उसैकोमा जान थाल्नुभयो । अघिल्लोलाई हेर्न पनि चाहनु भएन । सायद अरुहरूलाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ । उसको पसलमा भीड लाग्न थाल्यो । ग्राहक बरु पालो कुरेर बस्थे तैपनि अर्को पसलमा जाँदैन थिए । बिस्तारै उसको व्यपार फस्टाउँदै गयो । अर्को पसल सुक्दै गयो । यो एउटा उदाहरण हो, हरेकको अवस्था त्यस्तै हुन्छ । जहाँ राम्रो व्यवहार पाउँछन् ग्राहक त्यतै जान्छन्, जहाँ पाइँदैन त्यता जाँदैनन् । उर्जा रूपान्तरण भनेको यही हो ।
उद्देश्य सबैको पैसा कमाउनु नै हो । सबैले पैसा कमाउनकै लागि पसल थापेका हुन्छन् तर जसको आकर्षण केवल पैसाप्रति मात्र हुन्छ, उसको पसल सुक्दै जान्छ । जसको आकर्षण पैसाभन्दा पैसाका स्रोतप्रति हुन्छ, सेवाप्रति हुन्छ उसको पसल फुक्दै जान्छ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा जसले पैसालाई भन्दा पेशालाई माया गर्छ ऊ बिस्तारै धनी हुँदै जान्छ । जसले पेशालाई भन्दा पैसामा ध्यान दिन्छ ऊ कहिल्यै धनी बन्न सक्दैन । कमल रिजालले रातोपाटीमा लेखेका छन्।
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * +3= 13